पूर्व राजालाई सुझाव - बोल्नुस बोल्नुस ज्ञानेन्द्रज्यू : यिनीहरुको दिमाग खलबलिने गरी बोल्नुस ! कानका जाली फुट्ने गरी बोल्नुस ! - USNEPALNEWS.COM
पूर्व राजालाई सुझाव – बोल्नुस बोल्नुस ज्ञानेन्द्रज्यू : यिनीहरुको दिमाग खलबलिने गरी बोल्नुस ! कानका जाली फुट्ने गरी बोल्नुस !
दलीय प्रतिनिधिलाई मत पत्र छुन नदिइने